Shaqsiyadda Qofka iyo Saameynta Bulshada? | Saxil News Network
July 11, 2020 - Written by editor
B ulsho waa koox isku af, dhaqan iyo diin ah oo ku nool hal meel, waxa ay sameeyaan nolol guud, sababtoo ah aadanuhu kaligiis masameyn karo nolol, noloshu waxa ay ku xirantahay inta aad la nooshahay iyo meesha aad iskula nooshihiin.
Qofku waxa uu saameyn xooggan ku yeelan karaa bulshada uu la noolyahay, taasina waxaa qeyb ka ah isku xir naanshaha ka dhaxeeyo bulshada, bulshadu waa ey iscaawiyaan, hal meel ayay ku kulmaan, aragtiyo ayay kala qaataan isku xirnaanshahaasina waxa uu sababaa saameynta ugu weyn ee wax la saameyn karo.
Aragti gooni ah ayaa loo yeeshaa qofka bulshada ku soo kordhiyo wax cusub, gaar ahaan dhallinyarada waxa ey si dhaqso leh u qaataan ama ula qabsadaan dhaqanka cusub ee uu qofi bulshada kusoo kordhiyo.
Tusaale haddii dhalada (TV-ga) ayaa laga arkay wiil timaha geesaha uga xiiranyihiin oo caddaan ah kaddibna wiilkii fiirsaday ayaa isku dayay in uu sidi u xiirto, wiilka naqshadda cusub keenay soodhaweyn badan mahelin oo aan ka’ahayn saaxiibadiisa ku xeeran.
Qeybaha bulshada iyo qoyska wiilka jeegada xiirtay ayaa aad uga carooday falka uu wiilkooda sameeyay balse tallaabo muuqato kama eysan qaadin reerka, taasina waxa ey fursad siisay dhallinyarada ku xeernaa Faarax jeego xiir, maalinkii xigayna dhammaantood ayaa jeegada xiirtay bilo kaddibna waxaa magaalada laga furay tima jarayaal naqshaddaas uun timaha u jara?
Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah dhaqanka wiilkaas uu keenay sidee ayuu bulshada saameyn ugu yeeshay?
Waa dhaqan uu hal qof soo kordhiyay saameynna ku yeeshay guud ahaan bulshada iyo hab dhaqankoodii.
Hadaba adigu bulshada waad saameyn kartaa waliba inta kugu xeeran ama aad isku jaalka tihiin, adiga ayaase lagaa rabaa waxa aad bulshada kusaameyneyso wanaag mise xumaan.
Waxaan ku xireynaa “Dhaqankaagu dadbuu tusaale u yahay”!!
Alaah waynba mahad iska leh .
Diyaariye: Abdirahman Ali Ahmed